Khuphela ii-Remics-UX ze-Samsung Galaxy S | I-Androidsis
Ukusuka ekudityanisweni kwala maqela mabini mabalaseleyo abaphuhlisi bear Samsung Galaxy S, usandula ukuza kuthi esitsha evela kwii-oveni zayo, ezithi zibekho, ngokokubona kwam, eyona rom iphekwe ngeyona Samsung Galaxy S.
Ukuba uneGlass S eneClockworkMod Recovery efakiweyo, unethamsanqa, kuba i-rom endiyibonisa apha ngezantsi iya kukushiya umangalisiwe, ukuguqula i-terminal yakho ibe ngumatshini ohlaziywe ngokupheleleyo kunye nophuculo oluninzi ngokubhekisele ekusebenzeni nakwinqanaba lomzobo okanye elibonakalayo.
1 Iimpawu eziphambili zerom
2 Iimfuno eziyimfuneko
3 Indlela yokufaka i-Rom
Iimpawu eziphambili zerom
Phakathi kweempawu zayo eziphambili ukuqaqambisa, kufanelekile ukukhankanya ukubonakala kwayo okubonakalayo, apho umqalisi wokuqala weSamsung, iTouchwiz, ibandakanyiwe ngendlela esebenzayo ngokupheleleyo.
Ikwaquka ii -apps zemveli zeSamsung, Iiapps zikaSamsung, Umlawuli womsebenzi, umdlali wamva nje U-Sony Walkman kunye nesicelo semveli kwiqela lokuyila rom elichaphazelekayo.
Konke oku kuza ngobuchule kuhlanganiswe kwifayile ye- Isiseko se-android samva nje esenziwe yiCyanogenMod 9 ebusuku, Esinika isiqinisekiso esipheleleyo sokusebenza kwayo ngokuchanekileyo kunye nokutyibilika kwenkqubo.
Kufuneka sibenayo Ukubuyiswa kweClockworkMod kufakwe kwisixhobo sethu, ukongeza, kufuneka ukuba sisebenze ukususa iibhagi kwi-USB, kunye nokuba ibhetri igcwaliswe ngokupheleleyo.
Kubalulekile ukuba ufakelo oluchanekileyo lwalo msebenzi uqinisekileyo. ukufaka i-rom kwisiseko esicocekileyoUkwenza oku, landela amanyathelo kwesi sifundo silandelayo, esiya kusinceda kwinkqubo yokulandela yenza ufakelo olucocekileyo ngokupheleleyo kwirom entsha.
Into yokuqala ekufuneka siyenzile kukukhuphela i-zip yothando ukusuka apha, xa sele ukhutshiwe, siya kuyikopa ngaphandle kokucinezela kwi-sdcard yesixhobo sethu kwaye siya kulandela amanyathelo alandelayo.
Sicima i-terminal kwaye siyivule kwimowudi yokubuyisela
Phambili / susa i-davik cache
Ukunyuka kunye nokuGcina kwaye sifomatha yonke into ngaphandle EMMC y sdcard.
Buyela umva kwakhona
Sikhetha i-zip ye-rom kwaye siqinisekisa ukufakwa kwayo.
Nale siya kuba rom ngokuchanekileyo yethu Samsung Galaxy S, Kodwa ukuba ngexesha lokuqalisa kwakhona, sishiyeke ngaphakathi iluphu engapheliyo kwisikrini sokuqala, Siza kuphinda singene kwimodi yokubuyisela kwakhona ngokudibanisa amaqhosha amathathu kwaye siza kuphinda sikhanyise i-rom kwakhona ukusuka kwinyathelo 8, ngaphandle kwesidingo sokusula okanye ukufomatha nantoni na.
Iinkcukacha ezithe xaxe - I-Samsung Galaxy S, hlaziya nge-odin kwi-firmware 2.3.6 kunye neCF Root yayo, I-Samsung Galaxy S, uyifaka njani i-Rom ngendlela ecocekileyo
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Samsung » Iimpawu-UX yeyona nto intle ye-Samsung Galaxy S
Izimvo ezi-64, shiya ezakho
Molweni zihlobo, kuba xa uyikhuphela ithi akukho mboniso kwaye ayizukundivumela ndenze nantoni na esithi le fayile inokuba inentsholongwane?
Kuya kufuneka ucofe kwiqhosha lokukhuphela emva koko kwiwindow entsha kwicandelo elithi khuphela nakanjani.
Ifayile icoceke ngokupheleleyo.
UFrancisco, ukhe wayizama? loluphi uluvo olukufaneleyo?
Kwam eyona nto intle ndizamile, kwisithuba esilandelayo ndiza kuchaza iqhinga lokwenza ukuba isebenze nangakumbi,
Ukutshintsha i-kernel yemveli yothando lomtyholi 0.94 kunye nokufaka idatha yedatha ukusombulula iingxaki zesithuba
Kwisahlulelo sedatha, kuba i-kernel ezayo esemgangathweni ayikwamkeli oku kulungiswa.
Sele ndiyikhuphele kwi-xda kodwa andikayifaki okwangoku, ke ndine-v12 kwaye intle kakhulu.Ndizakulinda enye into encinci. kodwa ngezimvo ezikwi xda le rom intle kakhulu.
Ndingumntu othanda i-v12 de ndadibana nale, ngaphandle kwamathandabuzo yeyona ICS ibalaseleyo kwiGPS S
Ndiyifakile kwaye amaqhosha asekhaya nangasemva aguquliwe, kwaye akukho sandi, umculo awuviwa
isithethi sisebenza kuphela xa ndidibanisa ii-headphone ¬¬´´
Phinda uyenze kwaye uyenze ukuqala kwisiseko seJVU sokufomatha yonke into
Enkosi ngolwazi, rom ikhutshelwe kwaye ifakwe ngaphandle kwengxaki. Ukuza kuthi ga ngoku konke kulungile.
Umbuzo omnye, ngaba ikhona indlela ekungafuneki ukuba ubeke isikhonkwane ngalo lonke ixesha ifowuni imisiwe / itshixiwe / icofiwe? Iyacaphukisa kwaye andifumani khetho lokuyisusa.
Yiyiphi iPin uthetha ngayo ngeSim okanye inkqubo yokuvula ye-Android?
Ewe, ukuba ndikuxelela inyani, andiqinisekanga ngokupheleleyo, leyo iphuma xa isixhobo sizicima sodwa okanye usinqumamisa ngeqhosha elisecaleni, ndicinga ukuba iya kuba kukuvula kwe-Android.
Ndikwazile ukuyisusa kodwa alukho olunye uhlobo lwesitshixo esivelayo, isikrini sokuqalisa, ngaba oku kuqhelekile? Mhlawumbi ndikhangela into engekhoyo kule rom (okanye kwi-Android ngokubanzi).
Kuya kufuneka uye kwimenyu yezicwangciso, emva koko kwindawo yokutshixa isikrini kunye nakwindlela yokhuselo lweScreen.
Kulungile, umbuzo, faka yonke into kakuhle kodwa andinayo i-intanethi, sele ndiqinisekisile i-APN kunye nenkampani kwaye akukho nto. Ndingenza ntoni ??
Ukuphela kokufaka, kwaye undinika lo myalezo ulandelayo. Ngelishwa, i-porcess android.process.media iyekile. " Ithetha ukuthini, nceda !!!!!
Yenye yeengxaki endandinazo kwaye ndayisombulula ngokwenza useto olunzima.
Ukuba ngempazamo ndafomatha i-sdcard, kwenzeka ntoni?
Ii-roms ze-ICS aziphathi irediyo ye-fm okoko i-Samsung ingabakhululanga abaqhubi.
Wow, yinto endihlala ndiyijonga ngaphambi kokufaka i-rom kwaye ngeli xesha andizange. Ngaba iyaziwa ukuba iyakutshintsha kwixesha elifutshane?
Phakathi koonomathotholo kunye neengxaki endinazo nge-3G ndicinga ukuba ndiza kutshintshela kwenye, ikhangeleka intle kodwa ... 🙁
Ayibonakali ngathi i-Samsung iyabakhupha abaqhubi, njengeengxaki ze-3G zama ukuyisombulula ngokutshintsha imodem
Nabani na omaziyo osebenza kakuhle no-Yoigo kwi-Galaxy S? Okwangoku ndikunye nomnye we-ICS-based rom, oxhunywe kwi-Movistar (nokuba uvela kuYoigo) ngaphandle kweengxaki kodwa andazi ukuba yeyiphi imodem enale
Enkosi kakhulu ngoncedo.
Oku kuya kuba kuhle kuwe, yile ndiyisebenzisayo kwaye ivela kuYoigo nayo.
Inokuba yingxaki yokugubungela uYoigo eMurcia, engekho apho. Ndiza kuvavanya ezi ntsuku ukuze ndibone ukuba iyenzeka na kwiindawo ezininzi.
Ndiyabulela uFrancisco kwakhona.
Enkosi kuwe, kwaye uyazi ukuba akukho nto yenzekayo kuba uqhagamshele kwinethiwekhi ye-movistar, kuba i-yoigo isebenzisa inethiwekhi yemovistar ngokutshintshanayo ukubonelela ngokoluhlu olugqithisileyo.
Ndiyifakile nje, kubonakala ukuba yonke into ilungile, ndiyayithanda! Nantoni na endikuxwayisa ngayo kwenzeka ntoni !!!!!!!!
Iposti elungileyo ifuna nje ukubalulwa ngakumbi kwi "Mounts and Storage kwaye sifomatha yonke into ngaphandle kwe-emmc kunye ne-sdcard."
Andikwazi kuhamba nge-3g, kuphela kwi-3g, ngaba unayo imodem yokuhambisa i-venezuela?
Ngaba uziqwalasele ii-APN?
Ewe mhlobo, andazi ukuba iyakuba yinguqulelo ye-baseband
tshintsha kule: I9000XXJVT, ingxaki isonjululwe (Mhlawumbi ngenxa yokungazi kwafuneka ndibuyele kwiGingerbread, ndifake imodem ndize ndibuyele kwi-ICS), ndinentandabuzo enye ngayo, kuba ngoku xa ndijonga Useto / Indawo zonxibelelwano ezingenazingcingo kunye neenethiwekhi / Ngaphezulu ... / iinethiwekhi zeselfowuni ngamanye amaxesha (iya kubonakala ingakholeki) Ndifumana ibhokisi ebhalwe "Sebenzisa iinethiwekhi ze2G kuphela" Ukuba ungacebisa imodem engcono yeMovistar Venezuela, ndingayixabisa ngokwenene.
Ndinike ukuseta kwakhona okunzima, ndisebenzisa iikhowudi zika-samsung nayo yonke imimangaliso
Umbuzo omnye ... ukuba ndinayo i-galaxy S njengoko isiza, ndicinga ukuba yi-froyo 2.2.1, ingaba le rom ingasebenza? okanye kuya kufuneka ndiyivuselele eyokugqibela ukuze ndiyenze le nto? Enkosi..
Kuya kufuneka uyidlulisele kwi-Gingerbread kuqala kwaye ufake i-Recovery eguqulweyo, jonga kwibhlog enesithuba sendlela yokuhlaziya i-JVU nge-odin, esona siseko sisisiseko sokubeka iirom eziphekiweyo kamva.
Hayi kulungile .. Ndiza kuyikhangela ukuze ndibone ukuba unjani enkosi .. ah ukuba ungandixelela ukuba ngubani igama leposi ekufuneka uyijongile ngokukodwa i-xD
Ukuba ifana nezinye iirom kunye ne-ICS kuya kufuneka uhlaziye ngaphambili kwi-Gingerbread 2.3.x
Ndingayibeka njani imibala yescreen njengoko bevela kwasekuqaleni kuba ndiziva ndiphelile kweminye imibala?
I-paquito elungileyo kakhulu. Ngaba ucebisa ukuba utshintshe into? Imodem yerediyo okanye ikernel ukuze ibe ngcono ???
Inye kuphela into endiyicebisayo kukufaka idathafix.
Yikhangele kwiblogi ukuba kukho isithuba esenziwe ngendlela yokwenza:
UAlberto J. Fernandez Fuentes sitsho
Andithandabuzi, andihleki ehhh hehe, kufakelo olucocekileyo ngokupheleleyo i-sdcard ifomathiwe, kodwa kulapho ifayile yefayile ye-rom entsha yofakelo, yiyo loo nto inokucinywa.
Okanye kunokwenzeka ukufomatha yonke into, qalisa ifowuni ngesiqhelo kwaye uyixhume kwi-pc kwaye ukope ifayile ye-zip?
Andazi ukuba ndiyenza njani inyathelo, into endiyifunayo kukufomatha yonke into kwaye ungayiqali ifowuni, ke ngekhe ndiyazi ukuba ndiyifaka njani.
Phendula u-Alberto J. Fernandez Fuentes
Okokuqala ufakelo olucocekileyo lwenziwa ngokufomatha yonke into kunye nokufaka i-JVU, emva koko iifayile eziyimfuneko ziyakhutshelwa kwaye i-rom ikhanya
kulungile, ndenze uhlaziyo kwi-jvu ngolwe-Sihlanu, kodwa sele ndizifakile iinkqubo kunye neefayile, iinkqubo kunye neefayile azinamsebenzi kum ekubeni ndizifakile kwaye ndizikopa kwakhona, ukuba ndingayifomatha into okanye ndikope i-zip kwi-sdcard ukuba Ngaba sele uyifakile? Nokuba zikhona iifolda zenkqubo
Ndicinga ukuba kufuneka ndiqale ku-0, ndifake i-JVU kwakhona… ..
Uhambisa uFerreira Moreno sitsho
Ndiyabulisa ... ndifuna le Rom ukuba indibambe, kuba ndiyifakile kwaye yandenza ndaphambana.
Phendula u-Moises Ferreira Moreno
Enkosi kakhulu, ukuze iClockworkMod Recovery ifakelwe kwisixhobo sethu kwaye ndiyifaka phi ukuze ingasuswa.
UDaviss Cadiñanos sitsho
Kwimemori yefowuni sdcard ... ayifomathiwe
Phendula kuDaviss Cadiñanos
Undixelela ntoni? Ukubuyisela kwakhona akucinywanga nantoni na oyifomathileyo.
Uxolo ngokungalunganga, ndinesonka esili-2.3.6 kwaye xa ndizama ukuyifaka ngokufumana kwakhona andifumani khetho. kwaye ndifumana impazamo ebomvu ethi »e isishwankathelo esifutshane se-tmp / sideload / package.zip (akukho sithuba sishiyekileyo kwisixhobo) enkosi kwangaphambili
Ithini indawo yakho yokugcina?
Thumela ngeSelfowuni yeSamsung
Isiphelo sam yi-galaxy s i9000, yonke into icinyiwe ngaphandle kwe-sd, nangona kunjalo kugcino lwefowuni ndino-37,72 mb we-1,87gb, andazi ukuba inento yokwenza.
Ukupasa ngenene. Kuqala ndakhetha i-4.1.1 kodwa yaphazamiseka kwaye andiyithandi kakhulu, ndiye ndaya ku-4.0.4 kwaye ekuqaleni ibilungile, kodwa ke iwotshi iyekile kwaye ayisebenzi, ikhamera yaphahlazeka ... Nangona kunjalo, ibineziphene.
Lixesha lokuhlaziya le rom, nangona intle kakhulu iphelelwe lixesha.
Ndincoma uhlobo lweJelly Bean oluninzi lwepoli83 endilupapashe kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo, ngokukodwa inguqulelo 2.8.24, yiMui Jelly Bean kwaye okwangoku yeyona rom intle ndiyithathileyo.
Mnu Potato sitsho
Ndinengxaki !!! Ayizukundivumela ndikhuphele nantoni na kwiVenkile yokudlala !!! Kutheni iza kuba njalo? Ndizama ukukhuphela i-msn kwaye izisa: Ayikwazanga ukukhuphela "i-WhatsApp Messenger" ngenxa yempazamo (403). Kwaye xa ndizama ukukhuphela uhlaziyo lundixelela: Ayikwazanga ukukhuphela uhlaziyo "Igama lesicelo" ngenxa yempazamo (403).
Phendula Mnu Potato
Ngaba le rom ingatshintshelwa kwimowudi ye-2g?
ukuba kunjalo, ndiyinxibile, kodwa…. Ndiza kuhlala ndijonga
Ndiyavuyisana nawe, umsebenzi ogqwesileyo
Ifomathi / ikhadi lesdd
Ifomathi / inkqubo
Ifomathi / idatha
Ifomathi / boot
Yeyiphi ehambelana ne-emmc?
I-Emmc yi-sdcard okanye imemori khadi yangaphakathi.
Nge-17/10/2012 ngo-23: 23, «Disqus» wabhala:
Ndidinga uncedo konke okufanelekileyo ukufakelwa onke amanyathelo apn amiselweyo kodwa akukho nto iqhagamshela kwi-intanethi xa ndiqala ifowuni indixelela ukulayishwa kwe-kernel andazi ukuba iyakuba yinto yesiqhelo, idlule iiron kodwa ayidibanisi kum andina Yazi ukuba ndenze into engalunganga
Yiya ngqo uyokufumana iposti yeTsunami X3.0 kwaye uyifake kuba yeyona rom yomzuzu
Ndine-Samsung Galaxy GT I9000. Kwaye andinakukwazi ukulawula konke oku kukhanya, i-rom, imodem, i-kernel ... Njengoko indinike iingxaki, ndalandela amanyathelo esifundo (http://www.androidblog.es/2012/08/actualizar-samsung-galaxy-s-gt-i9000-a-android-4-0-3/) kwaye uyihlaziye. Isombulule ingxaki yam yokuvala usetyenziso, kodwa ngoku ndineengxaki ezintathu:
Rhoqo undixelela ngezicelo ezininzi "isicelo asiphenduli" Yima, Rhoxisa ... Ayisiyonto imbi, kodwa iyinkathazo.
b) Ngamanye amaxesha kuyacotha kakhulu ukuvula usetyenziso.
c) Xa benditsalela umnxeba, amaxesha amaninzi umthumeli akaveli kwiscreen.
Umbuzo ngulo: ingaba ndilungile ngeroma endiyibekileyo okanye -kwityala lakho- yeyiphi oyicebisayo?
Njengoko besenditshilo, andilawuli, ke ukuba undixelele ukuba kunyanzelekile ukuba utshintshe, ndingavuya ukuba ungandixelela ukuba ndiyifumana phi i-rom entsha, kwaye yeyiphi isifundo ekufuneka ndiyilandele. Ngaba unokulandela amanyathelo kwikhonkco endincamathisele apha ngasentla? Nditsho kuba ndinjalo sele ndiyibonile… Enkosi kakhulu kwangaphambili.
Usetyenziso olusemthethweni lwe-Androidsis kwiVenkile yokudlala
I-ZTE Athena, eyona smartphone incinci ivela kwi-ZTE